नेपाली नेताहरूमा यति फुटबल मोह रहेछ - प्रतिक्रिया - साप्ताहिक
दाउद त डरलाग्दा रहेछन् (फ्रन्टपेज : दाउद कनेक्सन) । उनको रहस्यमय जीवन अनौठो रहेछ । नेपाल बाहिर बसेर उनले कसरी यो सञ्जाल चलाइरहेका छन् ? खोजीकै विषय हो । दाउदका अन्य पाटाहरूका बारेमा पनि पढ्न पाइयोस् ।
गत अंकमा प्रकाशित ने मुनि र मञ्जुश्री पढियो (यात्रा सन्दर्भ : ने मुनि र मञ्जुश्री) । किशोर नेपाल जस्ता अग्रज तथा सम्मानित पत्रकारको कलममा केही त्रुटि देखिए । लेखकले लेख्नु भए जस्तो मञ्जुश्री महिला नै थिइन् भन्ने कुरामा इतिहासकारहरूबीच मतभेद छ । बौद्ध मतअनुसार उनी बोधिसत्व थिए अर्थात बुद्धत्व प्राप्त गर्न नसकेका व्यक्ति । तिनै मञ्जुश्रीलाई कतिपयले काठमाडौं उपत्यकाको पानी बाहिर पठाउने श्रेय दिएका छन् । इतिहासअनुसार मञ्जुश्रीले आफ्ना दुई शक्ति अर्थात् पत्नी वरदा र मोक्षदालाई क्रमश: फुलचोकी र नागार्जुन डाँडामा स्थापित गरेर काठमाडौं उपत्यकाको पानी बाहिर पठाएका थिए । त्यस्ता सिद्ध पुरुषलाई लेखकले महिला पात्रका रुपमा चित्रण गरी दिनुभएको रहेछ । जुन कुरा पचाउन गार्‍हो भयो ।
समर्थन गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ (मंगल होस् : वल्र्डकप फिभर) तर समर्थनका नाममा जथाभावि लेख्नु, नसुहाउने कुरा गर्नु उचित होइन ।
म फुटबल हेर्न चाहन्छु, जहाँ स्वच्छ खेल होस्, खेलको जादु होस्, जित–हार त सामान्य नै हो (रसियामा विश्वकप, नेपालमा भिडन्त) । सबै टिम फाइनलमा पुग्न सक्दैनन् । मात्र २ टिम पुग्नेछन् र, कप एउटाले मात्र लान सक्छ ।
नेपाली नेताहरूमा यति फुटबल मोह रहेछ (नेताको फुटबल मोह) । यति चासो–चिन्ता राख्ने नेताहरूले आफ्नो देशका खेलाडीहरूको स्तरोन्नतिका लागि पहल गरे हुन्थ्यो नि । पूरा नहुने नारालाई प्राथमिकता दिनुभन्दा खेलकुदको सुधारका लागि जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
कुन ग्रेड आउनेले के पढ्नेभन्दा पनि आफ्नो रुचि केमा छ (शिक्षा : कुन ग्रेड आउनेले के पढ्ने) ? त्यही विषय पढ्ने हो ।
साप्ताहिकमा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा हास्यव्यंग्य प्रकाशन गर्ने परिपाटी बसालियोस् ।
युरोपियन मुलुक तथा अन्यत्र ठूलो रकम खर्च गरेर जानुभन्दा भारतमा पढ्नु राम्रो हो (भारत अध्ययन : रोजाइमा प्यारामेडिकल तथा इन्जिनियरिङ । भाषा तथा संस्कृतिका हिसाबले पनि नेपाली विद्यार्थीलाई सजिलो हुन्छ ।
नेपाली बजारमा उपलब्ध इलेक्ट्रिक बाइक तथा स्कुटरका बारेमा पनि पढ्न पाइयोस् । पेट्रोलको अभाव हुँदा पनि सवारीसाधन प्रयोग गर्दा कुनै समस्या नआउने खालका सवारी साधन चढ्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।
राजेशपायलको चर्चित गीतको भिडियो पक्कै पनि राम्रो बन्ला (संगीत : २३ वर्षपछि भिडियो) । भिडियो किन यति समयपछि बनाउन लागिएको हो ? राजेशपायल जस्ता कलाकारले पहिल्यै बनाउनुपर्ने थियो ।
ललितकुमार– हेमकुमारी बाटाजू स्मृति संगीत पुरस्कारबाट सम्मानित भएकोमा बिनोदलाई बधाई (बानियाँ पुरस्कृत) । तपाईको सांगितिक जीवन सफल होस् ।
भारतीय अभिनेत्री जुही चावला जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सेलिब्रिटीहरूलाई समेटेर नेपाल सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यसो गर्दा नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सजिलो हुन्छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटक भित्र्याउने नारा मात्र दिएर हुँदैन ।
समर्थकहरूले यो चाहिँ राम्रो काम गरेछन् (समर्थकको राम्रो काम) । अरूले पनि उनीहरूबाट केही कुरा सिक्न सक्छन् ।
यी खेलाडीहरू हेर्दा पनि सुन्दर छन् (महिला दर्शकको ध्यान तान्ने खेलाडीहरू) । खेल पनि उत्कृष्ट नै प्रदर्शन गर्छन् ।
यो खबर पढेर नरमाइलो लाग्यो (विश्वकप फुटबलको ज्वरो) । नेपालीहरू किन यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छन् ?